Teoria miloko: torolàlana fototra hanambarana loko | Famoronana an-tserasera
Lola curiel | | Palety miloko, dia midika hoe
Amin'ny famolavolana sary, vitsy ny fanapahan-kevitra mamaly ny estetika fotsiny, ary koa ny fanapahan-kevitra momba ny loko. Fitaovana fifandraisana ny loko ary ny fomba fampifangaroana azy ireo dia afaka manova endrika tanteraka sy ireo fahatsapana manaitra azy. Ny fahalalana ny teôria ny loko sy ny fitsipika mifehy azy dia afaka manampy anao mamorona sombin-javatra mahomby kokoa ary hifehezana ny zavatra ampitain'ny zavatra noforoninao. Eritrereto fa rehefa mijery afisy, afisy na infographic, ny fampahalalana voalohany ataontsika dia mifandraika amin'ny loko. Raha ny momba ny pejin-tranonkala, ohatra, ny paleta miloko tsy mendrika dia mety hitarika antsika handao ilay tranokala aza, toy ny olona iray mirindra tsara izay mety hametraka mialoha antsika handinika tsara ny atiny. Azonao ve izao ny antony maha-zava-dehibe ny fahalalana ny teôria ny loko? TSARA Tohizo ny famakiana ity torolàlana fototra ity amin'ny fampifangaroana loko ary ianaro ny fikafika rehetra.
1 Inona no atao hoe teôria loko?
2 Hevitra fototra mifandraika amin'ny loko
3 Kodiarana miloko na kodiarana miloko
4.1 Loko Kilonga
4.2 Loko faharoa
4.3 Loko tersy
4.4 Ary ny mainty sy fotsy?
5 Torolàlana fampifangaroana loko
5.1 Fifanarahana loko
5.2 Ahoana ny fomba fampifangaroana loko amin'ny kodiarana chromatic
Inona no atao hoe teôria loko?
Teôria loko dia andiam-pitsipika fototra izay mamaritra ny lafiny rehetra amin'ny loko amin'ny famolavolana sary, zavakanto, sary na fanontana. Manampy antsika hahatakatra ny fiantraikan'ny loko sasany sy isika manome fampahalalana sarobidy momba ny fomba namoronana azy ireo ary ny fomba fifamenoan'izy ireo.
Hevitra fototra mifandraika amin'ny loko
Alohan'ny handinihako ilay lohahevitra dia heveriko fa zava-dehibe ny fahalalana ny dikan'ny toetra telo lehibe izay manampy anay mamaritra ny toetran'ny loko iray: hue, saturation ary fahazavana.
Midika amin'ny feo na ny loko, dia manondro ny ambaratonga izay azo ilazana ny loko iray na mitovy na tsy mitovy amin'ny loko hafa (mazàna loko voalohany: mena, mavo, manga). Tsotra, io ilay antsointsika hoe "loko".
Mamela antsika hanao katalaogy misy anarana amin'ny loko manokana mifototra amin'ny matetika refesina. Ohatra, raha mijery ny sary etsy ambony isika dia saika ny ankamaroantsika dia mamaritra ireo feo ireo ho manakaiky ny mena, satria izany no fahita matetika azontsika.
Izany no degre ny fahadiovana loko, ny loko madio kokoa, ny avo kokoa ny mahavoky azy. Indraindray, saturation no tiana holazaina miaraka amin'ny teny "hamafiny", satria ny loko mahavoky indrindra, ny madio indrindra, dia mahery ihany koa.
Antsoina koa hoe mazava, no fananana mahatonga antsika hahita loko toy ny mazava na maizina, satria ny loko maizina kokoa dia ireo izay manana a mamirapiratra malemy ary amin'ny mazava indrindra dia ny mifanohitra amin'izay no mitranga. Indraindray isika mampifandray an'io hevitra io amin'ny teny toa famirapiratana, lanja na fahazavana.
Kodiarana miloko na kodiarana miloko
Ny faribolana chromatic, antsoina koa hoe kodiarana miloko, dia fitaovana tena ilaina hamoronana palety sy fitambarana mety. Mandahatra araka ny tokony ho izy ny fivoaran'ny loko, samy manana ny toerany raikitra ary manampy antsika hahatakatra ny fifandraisana misy eo amin'izy ireo. Miorina amin'ireo fifandraisana ireo dia afaka manavaka isika loko telo karazana: ambaratonga voalohany, ambaratonga faharoa ary fampianarana ambony.
Izy ireo no rmaso, mavo ary manga. ireo dia tsy noforonina rehefa natambatra loko roa na maromaro, noho izany, no fototra ny sisa amin'ny loko. Amin'ny fampifangaroana azy ireo dia mamokatra ny loko faharoa.
Maitso, volomboasary sy volomparasy izy ireo. Ny loko faharoa dia noforonin'i mitambatra loko roa voalohany.
El LAMBA VOLOMPARASY dia ny fitambaran'ny mena sy manga
El voasary dia ateraky ny fampifangaroana mena sy mavo.
El maitso teraka tamin'ny firaisan'ny mavo sy manga.
Ny loko tersier dia ireo izay noforonin'i afangaro ny loko voalohany amin'ny loko faharoa:
El voasary mena na vermilion mipoitra rehefa atambatra ny mena sy ny voasary.
El voasary mavo o amber dia teraka avy amin'ny fitambaran'ny volomboasary sy mavo.
El mavo maitso, sokay na Carthusian, dia azo amin'ny fampifangaroana maitso sy mavo.
El manga maitso, turquoise na manga teal, dia noforonina tamin'ny fampifangaroana ny loko maitso sy ny manga.
El volomparasy manga teraka tamin'ny fampifangaroana manga sy volomparasy izy io.
El mena volomparasy na garnet dia azontsika amin'ny fampifangaroana ny mena amin'ny volomparasy.
Zava-dehibe ny mahalala izany ny loko voalohany dia tsy afaka atambatra mifanaraka tsara miaraka amin'ny loko faharoa mba hamoronana tertiary iray. Ohatra, raha atambatra manga sy volomboasary isika, ihany hahazo feo volontany isika. Mahaliana sy ilaina ihany koa ny famoronana ireo feo ireo, tsy maintsy mazava tsara izany Tsy sokajiana ho loko tersia, ambaratonga faharoa na voalohany izy ireo Zava-mahaliana! Raha afangaro ireo loko telo voalohany dia mahazo loko ihany koa.
Ary ny mainty sy fotsy?
Izay holazaiko anao izao dia hampandiso hevitra anao tanteraka. Ara-tsiansa dia tsy loko ny mainty sy fotsy. Ny mainty no tsy fisian'ny hazavana ary ny fotsy no fitambaran'ny rehetra aloky ny hazavana hita maso. Na izany aza, mahita mainty sy fotsy tsy tapaka isika nasiana tombo-kase amin'ny endriny ahoana no fomba ahazoanao azy?
Raha ny marina, izay rehetra hitantsika dia tsy mainty madio, na fotsy madio. Tena feo eo ho eo izy ireo izay azo amin'ny alàlan'ny fampifangaroana pigment amin'ny loko maivana na maizina.
Torolàlana fampifangaroana loko
Ny firindrana loko dia inona fotsiny mahatonga antsika hahatsapa ny loko mitambatra ho zavatra milamina sy mahafinaritra. Rehefa mihaona amin'izany firindrana izany ny paleta dia mahatsapa karazana iray isika "Milamina maso" de mahatonga antsika liana amina endrika irayToy izany koa, rehefa mahita ny loko mitambatra izay tsy mandeha isika dia mirona handà azy. Fahadisoana mahazatra adinoy fa tsy maintsy misy loko manjaka foana ary izany tsy tokony hampiasa loko tsy misy dikany loatra isikaNy fanaovana izany dia mety hahatonga ny hafatra tiantsika hampitaina aza tsy takatra (toy ny sary etsy ambony).
Ahoana ny fomba fampifangaroana loko amin'ny kodiarana chromatic
Ny kodiarana miloko afaka manampy antsika mamorona palety mirindra. Misy ny raikipohy mamela antsika hahazo palety fototra. Avy eo pAfaka manamboatra sy miasa amin'izy ireo isika betsaka araka izay tadiavintsika hahazo fitambarana vaovao. misy ny Fomba 6 hanambarana loko miaraka amin'ny faribolana chromatic.
Monochrome mitambatra: Amin'ireo tsikombakomba ireo dia mampiasa loko tokana avy amin'ny boribory chromatic isika ary ny ambin'ny tonony dia azo amin'ny alàlan'ny filalaovana saturation sy famirapiratana.
Fampifangaroana analog: Izy io dia miforona amin'ny alàlan'ny fampifangaroana ireo loko izay miseho miaraka amin'ny kodiarana miloko.
Fangaro mitambatra: Izy io dia azo amin'ny fampifangaroana ireo mifanohitra chromatic toy ny manga sy voasary. Amin'ity karazana fampifangaroana ity dia mila mitandrina ianao, misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny loko mandrafitra azy sy mety hiteraka "adin-tsaina". Ny fomba tsara indrindra hanambarana azy ireo dia ny fitadiavana ny fandanjalanjana, ny fisafidianana tononkira tsy dia mahavoky na ny fampiasana azy ireo miaraka amin'ny feo tsy miandany na fotsy.
Fangaro mitambatra: Mitovy amin'ilay iray mifameno izy io, loko iray manakaiky ilay mifameno ihany no ampidirina. Na dia mbola misy fahasamihafana betsaka aza, amin'ny filalaovana ny habetsaky ny loko tsirairay ampiasaina, dia misy drafitra mirindra kokoa azo.
Triad: Ho an'ity fifangaroana ity dia misy triangaly mitovy lenta amin'ny kodiarana miloko ary ny loko tavela amin'ny zorony no ampiasaina.
Fangaro mifameno na tetrahedral: Roa loko mifameno roa no atambatra, io no sarotra indrindra ampifandanjana, mazàna loko lehibe no voafidy ary ahena ny saturation na ny famirapiratan'ny ambiny.
Raha tianao ity torolàlana ity hanambarana loko, dia tsy azonao hadino ny lahatsoratray paleta miloko pastel.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » dia midika hoe » Teoria miloko: torolàlana fototra hanambarana loko